फोटो: ईश्वर देवकोटा
यो एउटा भान्जाले आफ्नो मामाघर सम्झिँदै लेखेको संस्मरण हो। यसमा २ वटा प्रसंग छन्। एक - यो फोटोमा देखिएको आँगनको कथा, अर्को - यो आँगनसम्म आईपुग्न हिंडेको बाटोको रोमाञ्चकारी यात्रा विवरण।
यो फोटो जुन स्थानमा बसेर लिईएको छ, त्यहाँबाट मुलबाटो दाँया हुँदै तलतिर जान्छ। आँगनतिर जाने र तलतिर लाग्ने गौंडोमै एउटा हँसिया उध्याउने ढुङ्गो छ। घाँस काट्न तल बारितिर लाग्ने जो कोहि पनि एकछिन त्यहाँ उभिएर हँसिया/खुर्पा उध्याएर मात्र तल झरेको मलाई याद छ। हँसिया उध्याउँदै गर्दा 'छोप्राकबाट उज्वल भान्जा आका हुन्?' भनेर सोध्ने गर्दथे। फलैंचाबाट म लाज मान्दै मुन्टो उठाएर हेर्थें र मुसुक्क हाँस्थे, सोध्ने मान्छेले पक्का गरोस कि 'हो रहेछ' भनेर। अनि बा (हजुरबुबा) ले बाँकी उत्तर दिनुहुन्थ्यो। खै किन हो मलाई पछिसम्म पनि मसेलमा उज्वल भान्जा भन्थे। पछि 'छोप्राक भान्जा'मा परिणत भयो। आमाको नाम चाहिँ 'मैना' नै रहिरह्यो।
म एकदिन यहि गौँडोमा सानो लठ्ठी बंग्याएर दुई छेउमा पाटको डोरी बाँधी बनाईएको धनुष-बाण लिएर बसेको थिएँ। आँगनमा चरोलाई पासो थाप्न खानेकुरा राखिएको थियो। यसका निर्माता हुनुहुन्थ्यो दिकप मामा। उहाँ खासमा दिपक मामा हो, तर सानोमा बोलि फुट्दै गर्दा भन्न नजानेर दिकप भन्थें। मैले लगभग ८-९ वर्ष हुँदासम्म पनि दिकप नै भनें। दिपक मामा मामाहरुमध्ये कान्छो हुनुहुन्थ्यो। वहाँसंग मसंग खेलिरहने समय हुन्थ्यो। मैले डिमाण्ड गरेका चिजबिज जम्मा पारिदिने जाँगर पनि थियो। म धनु-बाण बोकेर बसेको बस्यै भएँ। एउटा चरो आएन। आएको भए पनि मेरो बाण २ बित्ता पर पुग्थेन। तर मलाई धनुर्बिद्या नै सिकेको महसुस भयो।
यो आँगनमा खेलेको, लडेको, उठेको, दगुरेको याद छ। खले-गह्रोबाट दाइँ हालेको पराल सोहोर्दै उता टौवातिर लागेको याद छ। यो घरपछि ढिकी थियो, ढिकी पछि गोठ, अनि गोठपछि टौवा। टौवादेखि उता केहि निबुवा र आँपका रुख थिए। त्यो भन्दा उता चर्पी अनि तल्लो गह्रामा केराको झ्याङ्ग। मैले थाहा पाउने बेलासम्म गोठमा हल्का रातो रंगका, तिखा सिङ्ग भएका २ वटा जुरे गोरु, एउटा लैनो भैंसी, पाडो, एउटा बकेर्नो भैंसी र केहि बाख्रा थिए। आँगन मुन्तिर सिजनमा प्रसस्तै घिरौंला, काँक्रा, चिचिण्डाका झ्याङ्ग हुन्थे। भात खाएर चुठ्ने बेलामा लोटा बोकेर दौडिदै आँगनको डिलबाट तल्लो गह्राको बेलाउँतिको बुटोसम्म पुग्ने गरि कुल्ला गर्थें। त्यो बेलाउँतिको बोट मैले रोपेको थिएँ। सानुआमा (हजुरआमा) हुन्जेल कुनै बेर्ना- बुटा मरेनन। सबै हराभरा थिए। हरेकपल्ट दशैँमा टिका लगाउन जाँदा बुटो हेर्थें, पानी हाल्थें। अरुबेला सानुआमाले पानी हाल्नुहुन्थ्यो। वर्षैपिच्छे बुटो बढ्दै मभन्दा अग्लो भयो। जब बेलाउँति फल्न थाले, सानुआमा रहनु भएन। हामी मामाघर क्रम पनि पातलियो। दमको दिर्घरोगले सानुआमा बित्नुभए पछि २-४ पल्ट गएको याद छ। तर त्यो बेला मैले बेलाउँतिको बुटो पनि हेरिन।
म मसेल जाँदा घरमै आमासँग लुटपुटिएर बासिन। कहिले बासँग माथि खाईथोक, कहिले बगाले गाम, कहिले भट्टगाम, कहिले सपंगे, कहिले टारीखेत, कहिले पानी लिन ढापे, कहिले बुंदीखोल्सो, कहिले धान कुट्न तल निबेल खोलाको मिल। मैले नचारहेको ठाउँ छैन। निबेल खोलाको पानी मिल मैले सानोमा देखेको अदभुत चिजमध्ये एक थियो। बिजुली बत्ति पहिलोपल्ट त्यहिँ देखेको थिएँ। खोलाको पानी सिमेन्टेड कुलोद्वारा मिलको माथीसम्म ल्याई एउटा सानो रिजर्व ट्यांक बनाईएको थियो। त्यहाँबाट फलामको ठुलो ढ्वांग (पेनस्टक पाईप) हुँदै पानी बेगले तल मेसिनको टर्बाइन भएको ठाउँमा आउँथ्यो र मिलका फित्ता बेत्तोड़ले घुम्थे। म करिब ४ -५ वर्षको हुँदा देखेको त्यो चिजको मलाई यति धेरै कुरा मसिनो गरि याद छ कि, यसबारे एउटा छुट्टै ब्लग लेख्न सक्छु।
आफु हिंड्नसक्ने नहुन्जेल प्रायजसो मामाहरुले नै बोकेर मसेल र छोप्राक गराउनुभयो। मलाई काँधमा बोकेर हिंड्दाको रमाईला प्रसंग मेरा चारै जना मामाहरुसंग प्रसस्त छन्। आफु हिंड्न सक्ने भएपछिको हरेक आवत - जावत मलाई अहिले सम्झँदा अचम्मै रमाइलो लाग्छ। बाटो मात्रै रमाईलो भएर होईन, आफुलाई अचम्मै मायाँ गर्ने मामाघर जान पाउँदाको हर्षले मन फुरफुर भएर।
हामी केटाकेटिलाई गाउँ छेउको खहरे-भीर देख्नेबित्तिकै सधैं डर लाग्थ्यो। तर मसेल जान लाग्दा, गोरखा बजार, १३ किलो जान लाग्दा कहिल्यै डर लाग्थेन। तेर्सो तेर्सो बाटोमा माझगाम हुँदै कोईलिपानी मुन्तिरको चौतारो पुगेपछि एउटा बेग्लै रमाईलो लाग्थ्यो। पर पर सम्मको दरौंदी खोला, हरिया फाँट अनि साना-ठुला पहाडको चाङ्ग देखिन्थ्यो। दरौंदी पारीपट्टी माथि डाँडामा पृथ्वीनारायणले बनाएका गोरखा दरबारको छानो पनि देखिन्थ्यो। त्यहाँ पुगेर आँखाको एपर्चर खोलेपछि हामी लाग्थ्यौं देब्रेतिर, जहाँबाट चिलाउने, सिसौ, उत्तिस र खयरको बन सुरु हुन्थ्यो। तुँवालो नभएर छ्याङ्ग भएको दिन त्यहाँबाट सिधै निबेलको उकालो समेत देखिन्थ्यो। बुङ्ग बुङ्ग धुलो उड्ने बनको बाटोमा हामी बेतोडले सास रोकेर हिड्थ्यौं। दशैंको बेलामा बाघ ज्यादा लाग्थ्यो। कतिपल्ट त पर झाडीमा बाघ कराएको सुनिन्थ्यो। बुबा, काका, मामा वा अरु कोहि ठुला मान्छे साथै हुँदा चाहिँ बाघको डर मानिएन। छोरा मान्छेको हप्काईले बाघ डराउँछ भन्थे। तर आमा र म मात्रै त्यो बाटो जाँदैछौं भने चाहिँ मनमा ढुकढुक भईरहन्थ्यो। मेरो डाँकोले बाघ भगाउन सक्ने गरि म ठुलो भईसकेको थिईन, तर पनि लुरे स्वरमा 'डराउन पर्दैन आमा, अलि सानो सानो खालको बाघ त म लखेटीहाल्छु नि' भन्थें। मलाई थाहा थियो, मेरो स्वरले ठुला बाघ मरिगए भाग्दैनन्।
जरेबर फाँट (google maps 2020)
ओरालो सकेर जरेबर झरेपछि ढुक्क हुन्थ्यो। खेत-खेतै तेर्सो बाटो हिंड्न सजिलो लाग्थ्यो। जरेबरको आकर्षण उखु हो। जरेबरमा आजकल उखु छैनन्। त्यसैले उखुबिनाको बेरसिलो जरेबरलाई जरेबर नभनेर अरु क्यै भने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। फेवाताल झिकेपछि पोखरालाई कसरि पोखरा भन्नु! लामा लामा जरा भएका ठुला बरको रुखमुन्तिर लहरै उखु बेच्न राखिन्थ्यो। मान्छेले खाएर फालेका उखुका खोस्टाले बाटो छापिन्थ्यो। हिंड्दा लचक लचक हुन्थ्यो। रसिला, लामा लामा उखुका ढाँक नकिनी त्यो बाटो भएर हिंड्ने कोहि जाँदैनथिए। रातो रंगको उखु कडा हुन्थ्यो, हरिया रंगको नरम र रसिलो। एक मोहोरमा ठिक्क खाले, १ रुपैयाँमा ठुला उखु पाईन्थे। एक मान्छे अग्लो उखु खाँदै, टेक्दै, घिसार्दै म मामाघरसम्मै पुर्याउँथे। स्वादिला उखु, बाटो हिंड्ने मान्छे बास बस्न बनाईएको जस्ताले छाएको एउटा पाटी, बाटो छेउमा दरौंदीको white noise जस्तो लगातारको सुसाई, झ्याम्म परेका बरका गाढा अनि शितल छायाँ मलाई जरेबर भन्नेबित्तिकै सम्झना आउने चिजहरु हुन्।
कुईनोबाट रस चुहिनेगरि उखु चुस्दै चुस्दै अघि बढेपछि नयाँ साँघु आउँछ। त्यहाँ बस्ति बाक्लो थियो। हाइस्कुल थियो, धेरै पसल थिए। त्यति भएपछि त्यसलाई नयाँ साँघु बजार भन्न मिल्थ्यो। छोप्राकबाट जाँदा त्यहाँ खाजा खाने चलन थिएन। बाटो त्यति कटेको हुन्थेन। फेरी जहिले, जहाँ निस्किए पनि भात खाएरै निस्किने चलन हुँदा भोक लाग्ने बेला भईसकेको हुन्थेन। मसेलबाट फर्किंदा भने सधैं नै खाजा खान बसिन्थ्यो। चिउरा-तरकारी एक नम्बरको खाजा थियो। नयाँ साँघु सुरु भएदेखि नसकुन्जेलसम्म लहरै दुई लाईन पसलहरुबाट चिया, पाउरोटी, चुरोट, बिस्कुट, चप्पल, जर्किन, चिनी, मट्टीतेल, ताजा तारिंदै गरेको दुनोट, आदिको बासना हरर आउँथ्यो। बिभिन्न पसलबाट स्वाँ… सुसाउने गरि मिडियम वेभमा रेडियो नेपाल बजिरहेको हुन्थ्यो। कति बजेको समाचार आउँदैछ, त्यहि अनुसार टायमको पत्तो चल्थ्यो। "हलुका र मुलायम छ , हात्ती छाप चप्पल" भन्ने बिज्ञापनको अन्तिमको "चप्पल" शब्दको echo 'चप्पल - चप्पल - चप्पल' हुँदै पर पर सम्म फैलिन्थ्यो। दरौंदीको सुसाईमा मिसिन्थ्यो, अनि बिलाउँथ्यो।
नयाँ साँघुबाट दरौंदीलाई दाहिने पार्दै फाँटै फाँट हिंड्दा निबेल आईपुग्छ। दशैँ तिहारको बेलामा खोलो तर्न सकिने हुँदा फाँटको बाटो छोटो पर्थ्यो। स्थानियले अस्थायी पुल फड्के समेत हालेका हुन्थे। तर बर्खामा चाहिँ खोलाको फड्के बगाउँथ्यो। त्यसैले नयाँ साँघुबाटै झोलुङ्गे पुल तरेर पारीपट्टि शिखर तिरको बाटो निबेल पुग्न पर्थ्यो। फाँटको बाटोमा मजा आउँथेन। शिखरतिरको बाटोमा बाक्लो बन थियो। बाहिरबाट कालो अँध्यारो देखिन्थ्यो। लामा लामा लहरामा बाँदर मच्चिरहेका हुन्थे। साना साना खोल्सा हुन्थे, प्रसस्तै झरना देखिन्थे। बनको बाटोमा एउटा मिठो सुवास हुन्थ्यो। हरेक बनको एउटा सुवास हुन्छ। फाट्टफुट्ट बेलका रुखहरु थिए। बेल पाक्ने सिजनमा परैसम्म हरर बास आउँथ्यो। बल्ल बल्ल टिपेर एक दुई पल्ट खाईयो, तर स्वाद अचम्म मिठो केहि लागेन। त्यसपछि म काग जस्तो भएँ। (बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात क्या)। यो बाटो हिंड्न छोडेपछि मैले कहिल्यै बेलको रुख देखिन, बेल पाकेको पनि देखिन। भिरमा एउटा रुखमा अर्को रुख पलाईरहेको हुन्थ्यो, माथिबाट लहरा सर्लक्क पर्दै निक्कै तल सम्म झर्थे, घर आँगनतिर कहिल्यै नदेखिने चराचुरुङ्गि देखिन्थे। खोलाको सुसाई, झरना, चराचुरुङ्गिका आवाज, बाँदरका बथानको कल्याङ्ग मल्याङ्ग, बाटो हिंड्ने मानिसका गुन गुन, आफ्नै पसिनाको गन्ध, अघिल्लो दिन गाँसेको आफ्नो चप्पलमा पसिनाले चिप्लिंदै गरेको खुट्टा, थाकेर लोसे भएका त्यै खुट्टाका चाल, मलाई यस्ता साना साना चिज नियाल्दै, अनुभव गर्दै हिंड्न खुब मज्जा लाग्थ्यो।
निबेलको फाँट माथि, उकालो सुरु हुने बेलाको घरहरु यादगार थिए। एकदम नेपाली मौलिक ढाँचाका ४-५ घर थिए। त्यसमध्ये एउटा घरको अगाडी सानो खरले छाएको गोलाकार छाता जस्तो थियो, अहिलेको garden umbrella भन्न मिल्ने डिजाईनको। त्यस घरबाट हरबखत पुजापाठ गरिरहेको आवाज गुन्जिंथ्यो। बासनादार अगरबत्तिको धुवाँ आउँथ्यो। आँगनमा तुलसीको मठ मिहेनत गरेर सजाईएको हुन्थ्यो। म त्यो बाटो हिंडेको बेलामा आँगन तिर मान्छे चाहिँ खासै देखिन। तर लाग्थ्यो, त्यहाँ केहि न केहि धार्मिक अनुष्ठान र चहलपहल भईरहेको छ। हाम्रो बाटो आँगन मुन्तिर कुलोको डिलै डिल जान्थ्यो।
निबेलको उकालो लामै थियो, तर छोप्राकको जस्तो ठाडो उकालो थिएन। s आकारका घुमाउरो घुम्ती हुनाले ठाडै बाटो हिंडेजस्तो गाह्रो थिएन। तर बिचमा २-३ पल्ट नबसी माथि चौतारोमा पुगिन्नथ्यो। उकालो बिचमा कतै बाँसको झ्याङ्ग थियो, जहाँ मैले हरेकपल्ट फिरफिरे बनाएँ। दरौंदी र निबेल खोलाको बतासले बेत्तोड़ घुमाउने फिरफिरे मैले हातमा ठड्याएरै उकालो काट्थे। मसेलतिर लाग्ने तेर्सो बाटो आएपछि कतै खस्थ्यो। कहाँ खस्यो, फर्केर हेर्ने पनि गरिएन।
उत्तरतिर फर्किएको मसेल लाग्ने तेर्सो बाटो एकदम सेपिलो थियो। पसिना ओभाएपछि चिसो हावाले जाडो जाडो भएको जस्तो लाग्थ्यो। हामी उज्यालोमै मामाघर कहिल्यै पुगेनौं। बेलुका ६-७ जस्तो बजेको हुन्थ्यो। बाटोमा साना पसलमा झुण्ड्याइएका रेडियोका आवाज परसम्म गुञ्जयमान हुन्थे। बिशेषगरि समाचार र बेलुकाको घटना र बिचारको signature tune मलाई एकदम याद हुन्थ्यो। दशैंको बेलामा मानिसको चहलपहल बाक्लो हुन्थ्यो। अँध्यारो भयो भनेर डर मान्नु पर्दैनथ्यो। निधारमा अटुन्जेल टिका, टाउकाभरि एक भारी जमरा हल्लाउँदै सपरिवार फर्किएका, टिका लगाउने गन्तव्य पुग्न हतार हतार लम्किएका प्रसस्तै भेटिन्थे। दोबाटो र चौतारामा हालेका हरेक पिङ मैले नबिराई खेल्थें। ढिलो भईसकेको छ भने २ सर्को मात्र नि खेल्थें।
अन्तत: तेर्सो तेर्सो बाटोमा सपंगे, भट्टगाम हुँदै मामाघर पाण्डेगाम टेकिन्थ्यो। मामाघर पुग्न २ मिनेट बाँकी हुँदा म दौडेर अरु भन्दा अगाडी पुग्न खोज्थें। ४-५ घण्टा हिंडेको थकान, भोक र पसिना जम्मै बिर्सेर त्यो आँगन टेक्दा बेग्लै स्फूर्ति आउँथ्यो। झमक्क परिसकेको साँझमा प्रायजसो हजुरबुबा सानो टुकी बालेर तमाखु खाँदै हुनुहुन्थ्यो। म खुसीले बाटोबाट एकै सासमा कराउँथे - 'बा s s … हामी आएम!'
पोखरा ब्लुज: तुँवालोकि पूर्णिमा
'मिर्मि मुनि काली थुनेको, अन्तै मायाँ लाइछेउ रे मायाँले, साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको'… पश्चिमाञ्चल क्याम्पसबाट 'माछापुछ्रे भ्यु-पोइन्ट' पिकनिक जाँदा यहि गीत बारम्बार बजिरह्यो। इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियरिङ्को कक्षामा जम्मा जम्मी ३५ जना बिध्यार्थी, त्यसमध्य केटिहरु जम्मा ६ जना। ६ जनामा एउटी विबाहित, एउटीको ब्वाईफ्रेण्ड, एउटी चाहिं केटा देख्यो कि कुटौलाझैँ गर्ने। गाडीमा राम्रो गीत बज्दा यसो राम्री केटितिर फर्केर गाउन पनि थोरै 'अप्सन' बाँकी थियो। बसभरिका जम्मै तोर्पे केटाहरु तिनै बाँकी रहेकातिर फर्केर गला खोलि खोलि गाउने। कसको सुनुन, कसको नसुनुन! जम्मै केटाहरुलाई आफ्नो इम्प्रेसन तिनै तिर देखाउनु छ। कता हेरुन, कता नहेरुन! खैर, यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यत्ति। सबै इञ्जिनियरिङ् कलेजको यहि हविगत हो।
पोखरा पहिलोपल्ट छिर्दा म निरास भएँ। कोत्रे काट्ने बित्तिकै जम्मै बाटो मलाई पोखरा-पोखरा लाग्न थालेको थियो। हरेक मोड काटेपछि 'अब फेवाताल देखिन्छ' भनेर आँखा तन्काउँथें। बसले बिजयपुर खोला तर्यो, तैपनि फेवाताल आएन। पर परसम्म डाँडातिर आँखा लगाएँ, माछापुछ्रे पनि छैन। त्यो दिन तुँवालोले ढाकेको रहेछ। मेरो आँखाभरि टिभीमा देख्ने गरेको फेवाताल र माछापुछ्रे, म स्वयम् पोखरामा पदार्पण गर्दा देखिएनन। तैपनि सबै दृश्य आँखाभरि खिचीरहें। मोबाइल भन्ने आएकै थिएन, रिल-वाला क्यामरा पिकनिक र दशैँमा मात्र हुन्थे। एक जोडी आँखाले खिचिरहें। पोखरा आएपछि त माछापुछ्रे देखिनुपर्ने। अमरसिंह चोक आइपुग्दा सम्म मलाई बिश्वासै लागेन, म पोखरा जाँदै छु भनेर। मैले छेउकै सिटमा रहेको एक मान्छेसंग सोधें- 'दाइ पोखरा आउन अब कति बाँकी छ?'। तिनले हाँस्दै भने- 'खै भाइ, हाम्रो पोखरा त यहि हो, तिम्रो पोखरा कहिले आउँछ कुन्नि'! धन्न अरु कसैले सुनेन त्यो, नत्र मलाई बसभरिका मान्छेले उडाउँथे। कहिल्यै पोखरा जान नपाएर अत्तालिएको मलाई पोखरामा त हरेक दिन फेवातालमा नुहाएर माछापुछ्रेमा लुगा सुकाउँछन् जस्तो लाग्थ्यो।
भर्ना हुने म्यादको अन्तिम दिनको अन्तिम मिनेटमा मेरो इञ्जिनियरिङ्को पढाई पक्का भएको थियो। 'स्कोलरसिप'मा नाम निस्किए पनि समयमै खबर नहुँदा गोरखा छोप्राकमा मलाई ढिला गरि थाहा भयो। ४ बज्न १० मिनेट बाँकी छँदा प्रशाषन शाखाका सरले बल्लबल्ल फोटो टाँस गरि भर्ना रकम बुझेपछि मैले धेरै लामो सास फेरेको थिएँ। पैसाको जोहो कसरि गरियो, त्यता नजाउँ। बुद्धिसागरको कर्णाली ब्लुज जत्रो अर्को 'भर्ना ब्लुज' बन्छ मेरो। भर्ना गरेर फर्किंदा औध्योगिक क्षेत्रमा रहनुभएका मामाले खल्तीमा ५०-५० का सातवटा नोट हालिदिनु भयो, बाटोखर्च भनेर। त्यति धेरै 'बाटोखर्च' मैले अहिलेसम्म पाएको थिईन। जिन्सको खल्तीभित्रको सानो गहिरो खल्तीको भित्रपट्टि पट्याएर राखें। त्यो दिन, न गाडीको कन्डक्टरसंग भाडामा दोहोरि खेलें, न बाटोमा सबभन्दा सस्तो खाजा रोजें।
त्यसको केहि महिनापछि पातला ओढ्ने ओछ्याउने, केहि थान खेस्रा कापी, राम्रा बलपेन, मनपर्ने गीतका २ वटा चक्का, केहि जोर लुगाकपडा, र अन्य त्यस्तै चिजबिज पोको पारेर दोस्रो पल्ट लामाचौर उत्रिएँ। खुट्टामा सजिला जुत्ता थिए। ‘गोल्डस्टार’ लगाउँदा हेप्छन भनेर, उही मुल्यमा आउने कुनै ब्राण्ड थियो, गोल्डस्टार नलेखेको। इञ्जिनियरिङ् अध्ययन संस्थान, पश्चिमाञ्चल क्याम्पस (बोलीचालीको भाषामा डब्लु.आर.सी) को गेटबाट झन्डै पाँच मिनेट भित्र सेती खोलाको डिलनेरै भएको होस्टेल देख्दा सुरुमा त हराउँछु कि जस्तो लाग्यो। पाँचवटा ब्लक थिए, हरेकमा ३ वटा तला, हरेक तलामा २८ वटा कोठा। मान्छे नहुने हो भने त सबै भूतबङ्गला जस्ता देखिन्थे। तर बिद्यार्थीको चहलपहल यति हुन्थ्यो कि २४ सै घण्टा कोहि न कोहि पढाईको प्रेसरले भट्किरहेका हुन्थे। त्यहाँको होस्टेल बसाईको लगभग सबै कथा हिन्दि फिल्म 'थ्री इडियट्स' जस्तै छ। बाथरुमको पालो, पानीको दुख, लुकेर बाल्ने हिटर, कौसीमा चल्ने 'स्टिम इन्जिन', एक्जामको चटारो, साथीहरुको प्रतिस्पर्धा, रिजल्ट आउने दिनको रौनक, केटिको निहुँमा हुने मारमुंग्री, आदि इत्यादि। झण्डै ३ वर्षको होस्टेल बसाई समग्रमा ३ घण्टाको रोमान्चक फिल्मझैं रह्यो।
पि.एन क्याम्पस वा बिन्दबासिनीतिर झरेको दिन बगरबाट धेरैजसो हामी हिंडेरै लामाचौर पुग्थ्यौं। कि त हाम्रो खल्तीमा पैसा हुन्थेन, कि त गाडीको पुरानो खलासीसंग हाम्रो लफडा परिसकेको हुन्थ्यो। के.आइ.सिंह पुल हुँदै उकालोमा लेफ्ट-राइट-लेफ्ट राम्रै चल्थ्यो। ५ रुपैयाँ साधारण भाडामा बिध्यार्थी कार्ड देखाउँदा ३ रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। त्यहि ३ रुपैयाँ तिर्दा पनि कार्ड सक्कली/नक्कली छुट्याउँदै र बाझाबाझ गर्दै हामी उपल्लो दीप पुग्थ्यौं। त्यहाँसम्म पुगेपछि हिंडेर क्याम्पस पुग्न धेरै लाग्दैनथ्यो। "साला, भोलि ‘डब्लु.आर.सि’कै बाटो आउँछस होइन, पख टायर बल्छ ह्याँ ह्वारह्वार", यो बाक्य त्यो रुटमा हिंड्ने हरेक जसो गाडीका कन्डक्टरले सुनिसकेका हुन्थे। अरु सबै बेलामा ज्ञानी र 'हल्का पढन्ते' टाईपमा गनिए पनि भाडा तिर्ने बेलामा चाहिँ कलेजका हुल्लडबाजकै ग्यांङ्मा मिसिन्थें। ‘पाखुरा सुर्किने’ दलमा मिसिए पछि ज्ञानी भएर पछाडी उभिए पनि भाडा छुट पाइन्थ्यो।
पहिलो सेमेस्टर म गाउँबाट पहिलोपल्ट सहर पसेको केटोझैं जिल्ल परेर हराएँ। पढाईमा अब्बल नभए पनि ७५ % कटाएँ, राम्रै बिद्यार्थीमा गनिन्थें। दोस्रो सेमेस्टरमा म पूर्णिमाको साथी भईसकेको थिएँ। कसरि भएँ, मलाई याद छैन। इन्ट्री खासै फिल्मी रहेन। पूर्ण चन्द्र जस्तै उज्याली पूर्णिमाका अक्षर सुन्दर थिए। उसको अनुहार दुरुस्तै अक्षर जस्तै थिए, बान्की परेका। उ सुन्दर थिई। हामी धेरै प्राक्टिकलहरुमा संगै हुन्थ्यौं। ग्रुप् वर्कमा, कक्षामा, पिकनिकमा, क्याफेमा संगै हुन थालेपछि एकाएक 'नोटिस' हुन थालें। पूर्णिमा भन्दा झन्डै दोब्बर हाइटको त्यो लम्बु केटा को हो भनेर अरु डिपार्टमेन्टका केटाहरु गम्भीर 'इन्क्वाइरि'मा लागे। एक्लै दुक्लै बाटो हिंड्दा घुरेर हेर्न थाले। ह्या... मलाई बाल! म उसको कोइ न कोइ। कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात। म वास्ता नगरी हिंड्न थालें।
पूर्णिमा र म मिलेर पुरानो उखानलाई अलिकति मिलायौं। म काग पनि थिईन, उ बेल पनि थिईन।
“हन?”- यो चाहिँ उसको थेगो। “हैन?” भन्न कहिले जानिन।
उसका र मेरा अक्षर मिल्थे। नपत्याउने गरि दुरुस्तै मिल्थे। गोला गोला सर्लक्क परेका अक्षर कक्षामा सबभन्दा फरक थिए। लेक्चररले एकपल्ट त दुवैजनालाई अफिसकोठामा बोलाएर झाँको झारे- "जाँचमा किन तैले उसको नाम लेखेको? दुबैजनाको उत्तर एउटाले लेख्ने? दुबैको पेपरमा जिरो हाल्दिन्छु"। हामी ट्वाँ पर्यौं। उनकै अगाडी अफिस कोठामा दुवैजनाले लेखेर नदेखाएसम्म मानेनन्। दुवैजनाको अक्षर एउटै ढाँचाका भए। उनको चित्त बुझ्यो।
पूर्णिमा मलाई नयाँनयाँ कुरा सुनाउँथि। साथीहरुका बारेमा, सम्बन्धका बारेमा, उसको परिवारको बारेमा, उसको पोखराको बारेमा। बेलाबेलामा उसको ब्वाईफ्रेण्डको बारेमा पनि सुनाउँथि। म सबै कुरा ज्ञानी भएर सुनिरहन्थें। कहिलेकाहिँ भन्थी- "तँ अरुभन्दा फरक छस"। त्यसो त सबैजना एक अर्का भन्दा फरक हुन्छन। "हैन क्या, तँ अरुभन्दा फरक छस। अहिले बुझ्दैनस, पछि बुझ्छस"। म जिल्ल पर्थें। एउटै उमेर, एउटै पढाई, उस्तै भोगाई, फेरी किन उसले धेरै कुरा थाहा पाई, मैले पाइन?
म पनि पत्रपत्रिकामा झुन्डिने मान्छे। म उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, बिज्ञान, माओबादि युद्ध, आदि बारे सुनाउन थालें। अब ज्ञानी भएर सुन्ने पालो उसको थियो। बिशेषगरि गोरखाका प्रसंग उसको लागि नयाँ थिए। अब एक अर्काको लागि सुनाउने नयाँनयाँ बिषय निस्किन थाले। गफ त कहिल्यै नसकिएला जस्तो हुन लाग्यो। पहिलो बर्षको जाँच सकिएपछि जाडो बिदा भयो। सबैजना घर जान तम्सिन थाले। मलाई भने झोला बाँध्ने जाँगरै चलेन। उद्घोषण तालिम सिक्ने भनेर बसें। यता पूर्णिमासंग गफ नै सकिएको छैन, यत्तिकै छोडेर कता जाउँ। फर्केर आउँदा मैले भन्दा धेरै कुरा जानेकी रहिछ भने? बर्बादै हुन्छ। मसंगै होस्टेलका अन्य ५-७ जना साथीहरु पनि सिक्ने भए। हामी हुल बाँधेर हरेक दिन उद्घोषण तालिम दिने ठाउँ न्युरोड पुग्थ्यौं।
कलेजको बिदा सुरु भयो। तर पूर्णिमा र मेरो व्यस्तता सुरु भयो। हामी दिनभर कलेजमा बिताउन थाल्यौं। कहिले कुनै ल्याबको अगाडी, कहिले कुनै ल्याबको। ३१२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ठुलो क्याम्पसको महत्व हामीले बल्ल बुझ्यौं। उसले पटकपटक मलाई उसको ब्वाईफ्रेण्डसंग भेटाउँछु भनि। तर त्यो दिन कहिल्यै आएन। उ घरबाट जहिले पनि जाडो महिनामा ‘एक्स्ट्रा कोर्स’ छ भनेर आउँथि। हरेक दिन ट्याक्क १० बजे। म खाना खाएर तयार भएर बस्थें। कलेज परिसरका सबै सिंढी र चौरमा अड्डा जमाएर बसियो। मित्रता- रबरमा बाँधेको डल्लो जस्तो थियो। कहिले एकदम नजिक, कहिले हुत्तिएर कहाँ हो कहाँ टाढा।
धर्म, राजनीति, युद्ध, पढाई, फिल्म, गीत, प्रेम, परिवार, साथीभाइ, लगभग सबै कुरामा बहस हुन्थ्यो। तर अन्त्यमा उ र म एउटै टिममा हुन्थ्यौं, प्रतिपक्षका को हुन्थ्यो, अहिले याद छैन। केहि दिनमा ति सकिएपछि हाम्रो अड्डा बाटुलेचौर बन्यो। त्यहाँ पनि अलि अफ्ठ्यारो लागेपछि हामी कालीखोलाको जिर्ण झोलुङ्गे पुलमा झर्यौं। एउटा चिप्स, दुई वटा चाउचाउ, एउटा कोक लिएर कालीखोला झरेपछि हामी साँझ ४ बज्ने बेलामा उठ्थ्यौं। कुरा सुनेरै महान बन्ने भए बिचका केहि फक्लेटा झरेका त्यो थोते झोलुङ्गे पुल सबैभन्दा ज्ञानी हुन्थ्यो होला। जाडो बिदा सकियो। अहँ, गफ सकिएन।
"…. अन्तै मायाँ लाइछेउ रे मायाँले, साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको"।
माछापुछ्रे भ्यु प्वाइन्ट पिकनिक जाँदा बसमा कुन चाहिँलाई औधि मनपरेछ क्यारे, घुमाई घुमाई १७ चोटी बजायो। धेरै जना केटाहरुले भाका मिलाउँदै पूर्णिमा तिरै हात सोझ्याएर आफ्नो कला देखाए। तर उ मलाई पुलुक्क हेर्थी। मैले अरु केटीहरुसंग बोले भनेर उसलाई बेलाबेलामा रिस उठ्थ्यो। आँफुलाई पछिल्लो पल्ट एउटी पहिलो बर्षकि केटीले दिएकी प्रेमपत्र जस्ताको तस्तै पूर्णिमालाई लगेर बुझाएको थिएँ। संगै खोलेर पढ्दै हाँसियो। एकपल्ट झर्किएर भनि- "जस्तो पायो त्यस्तो केटिसंग संगत नगर्नु, तिम्रो लागि केटि म छानिदिन्छु"। मैले ज्ञानी भएर टाउको हल्लाएँ - “हस”।
“छेउको सिटमा आउ न"! नबोलीकनै उसले बोलाई। मैले पनि कसैले नसुन्ने गरि सुनें। धेरै नजिक भएपछि २० हर्ज देखि २० किलोहर्ज बिचको ‘फ्रिक्वेन्सी रेन्ज’नै नचाहिने। हातमा रबर बाँधेर डल्लो घुमाएजस्तो हाम्रो मित्रता, यो बेला खुम्चिएर एकदम नजिक थियो। पिकनिक सार्है रमाइलो रह्यो। धेरैका लागि अविस्मरणिय। त्यो दिनको पिकनिकको कथा आफ्नो ब्याचका साथीहरु अहिले पनि हाल्छन।
एकदिन होस्टेलमा धोएर सुकाएको सर्ट चिसोले नसुकेर साथीको कालो सर्ट लगाएर गएको थिएँ। त्यो दिन पूर्णिमा मेरो प्रशंसा गरेको गर्यै भई। "भोलिपल्ट नि यहि सर्ट लगाउ है, म क्यामरा लिएर आउँछु, तिम्रो फोटो खिचेर म घरमा राख्छु। सधैंलाई सम्झना हुन्छ"। म मक्ख परें। बेलुका आफ्नो सुक्न लागेको सेतो सर्ट फेरी पानीमा भिजाएँ। साथीसंग बहाना बनाएर उही सर्ट ढल्काएर गएँ। तर पूर्णिमाले क्यामरा नै ल्याईनछ। अँझ उसलाई त हिजो भनेको कुरा यादनै रहेनछ। मेरो उत्साहको मिटर जिरोमा झर्यो। मैले केहि प्रसंग नै नझिकी चुपचाप फर्किएँ। उसले फेरी एकपल्ट रबरको डल्लो टाढा हुत्त्याई।
पहिलो सेमेस्टर देखिने मेरो नम्बर बढ्ने क्रममा रह्यो। दोस्रो बर्षदेखि सबै सेमेस्टरमा लगभग ८०% को हाराहारीमा रह्यो। उत्तरार्दतिर पढाईमा मजा आउन थाल्यो। संगैका साथीहरु सार्है मिहेनती र मिलनसार थिए। मित्रता र प्रेम बिचको फरक मार्कशिटले स्पष्ट देखाउँदै थियो। अन्तिम बर्षमा एउटा एफ.एम. मा कार्यक्रम चलाउन थालेको थिएँ। साथीहरु मिलेर आफ्नै पहलमा रोबोट पनि निर्माण गर्न लागेका थियौं। अब उसको र मेरो गफ पनि लगभग सबै सकीइसकेका थिए। कालीखोलाको बुढो झोलुङ्गे पुल खोलाले लग्यो कि के भयो, वास्ता भएन। भविष्यका नयाँ पुलहरु बन्दै थिए। एकदिन महेन्द्रपुलको सस्तो बजारबाट प्लास्टिकका जुन र तारा ल्याएँ। आँफु सुत्ने ठिक मथिल्लोपट्टि टाँसेको थिएँ। बत्ति निभाएपछि पिलिक्क हरियो बलेका जस्ता देखिन्थे। एउटा चन्द्रमा मेरो सिरानी माथितिर बस्यो, भित्ताभरि ताराहरु। मलाई अचम्मसंग रमाइलो लाग्यो।
पढाई सकिनेबित्तिकै उ आफ्नो ब्वाईफ्रेण्डसंग बिहे गर्ने योजना सुनाउँथि। म त्यो पनि रमाइलै मानेर सुनीरहन्थें। उ आफ्नो नयाँ जीवनको रमाइला योजना सप्रसंग व्याख्या गरिरहन्थी। त्यो पनि ज्ञानी भएर सुनें। साथीसंग माग्न नपरोस भनेर मैले पैसा जोगाएर कालो सर्ट किनेको थिएँ। तर त्यसमा उसको कुनै चासो हुन्नथ्यो। चासो नदेखाएकोमा मेरो गुनासो पनि रहेन। कुनै अपेक्षा नराखिकनै नजिक रहनु काइदाको चिज रहेछ। जतिखेर पनि सजिलै ‘बाई’ भन्न सकिने!
पोखरा बसाईको अन्तिम दिन झोला मिलाउँदै गर्दा प्लास्टिकका जुन उप्काउन मनलाग्यो, तर अँह, त्यसै छाडीदिएँ। त्यो ठाउँमा म जस्तै अर्को कोहि पुग्दा, त्यहि टिलपिल गर्ने जुन र तारा देखोस। पोखरा छोडेर बिजयपुर खोला तरिसक्दा पहिलोपल्ट पोखरा आउँदाजस्तै तुँवालो थियो। तर त्यसबेला माछापुछ्रे र फेवाताल खोज्न जरुरि रहेन। मलाई थाहा थियो, माछापुछ्रे र फेवाताल कहाँकहाँ बस्छन भनेर।
at 4/03/2016 1 comment:
Labels: पोखरा ब्लुज: तुँवालोकि पूर्णिमा
" ओने कोन्जो !" भन्दै उसले मलाई एक्कासि तिकुरिल्ला ट्रेन स्टेसनको सब-वे मा अँगालो हाली | हल्का अँध्यारो भईसकेको थियो | यसै पनि ह...